Plasma Mobile ikozvino inogona kuiswa pane Android mobiles | Linux Vakapindwa muropa
Pasina nguva refu takagamuchira nhau dzinofadza dzekuti Plasma Mobile, iyo KDE Project inoshanda sisitimu, yaive neziso mifananidzo iripo yekuvandudza uye kuyedza ramangwana Gnu / Linux-based operating system. Pasina nguva refu yapfuura iyoyo uye isu hatina kana imwe chete asi nzira mbiri ku gadza Plasma Mobile pane mafoni ane Android.
Idzi nzira hadzina kuitirwa vashandisi vekupedzisira izvo, ndiko kuti, ivo hatigone kuishandisa seiyo huru smartphone, asi kana tichigona kuiisa kuti tione kuti chii chitsva kana kuti chii chaizvo chine KDE Plasma Mobile.
Nzira yekutanga uye chinokurudzirwa ndiko kuiswa kwePosmartketOS. Iyi inoshanda sisitimu inoenderana neAlpine kugovera, yatove nePlasma Mobile uye mushure mekumisikidzwa kwayo ichakubvunza kana iwe uchida kuisa ino system interface. Mune ino kesi, PosmartketOS inoshanda semurevereri pakati peiyo smartphone Hardware nePlasma Mobile software. PosmarketOS kuisirwa inowanikwa pa webhusaiti yepamutemo yeprojekti.
Maitiro echipiri anoenderana ne kumisikidza kuburikidza neiyo Halium Project. Halium rukoko runokutendera kuti umhanye chero rudzi rwekushandisa pane chero smartphone. Nekudaro, kwete chete maapplication eApple anoshanda asiwo Ubuntu Runhare maapplication, Windows Runhare maapplication, nezvimwe… Halium inowanikwa munzvimbo yekuchengetera ye Github.
Iyo Halium chirongwa chinopinda uye hachina kukura chirongwa, zvirinani kwete sevanhu vakuru sePosmarketOS, saka tinokurudzira kushandisa nzira yekutanga pamberi peiyo Halium chirongwa. Chero zvazvingaitika, nzira mbiri idzi hadzisi yekuisa Plasma Mobile uye iine sisitimu yekushandisa pane yakajairwa nhare asi kuyedza uye kuyedza iyi nyowani sisitimu inoshanda inoita senge yechitatu nzira yevashandisi. Zvisinei Ichazosvika nenguva here kana kuti ichagara muzvivakwa izvi? Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Plasma Mobile ikozvino inogona kuiswa pane Android mobiles
Zvinonakidza, ndinokutendai zvikuru neruzivo ... mune yangu kesi ndine LG h810. Handifungi kuti ndinogona kana kuzviratidza. Nekudaro ... ini ndave kutoda kutora imwe iyo inonditendera kuti ndiyedze. Kwaziso